Kwethulwa i-Creative Factory: Izikhangiso Eziselula Zivele Zaba Lula | Martech Zone
Kwethulwa i-Creative Factory: Izikhangiso Zamaselula Zivele Zaba Lula
NgoMsombuluko, Mashi 27, 2017 NgoLwesibili, ngo-Mashi 28, i-2017 UYariv Erel
Ukukhangisa ngamaselula kuyaqhubeka nokuba ngomunye wemikhakha ekhula ngokushesha kakhulu futhi eyinselele kakhulu emnothweni wezentengiso womhlaba jikelele. Ngokusho kwe-ejensi yokuthenga yezikhangiso iMagna, ukukhangisa ngedijithali kuzodlula ukukhangisa kwendabuko kwe-TV kulo nyaka (sibonga kakhulu ukukhangisa kwamaselula). Ngo-2021, ukukhangisa kwamaselula kuzobe sekukhuphuke kwafika ku- $ 215 billion, noma amaphesenti angama-72 wesabelomali esiphelele sokuthengwa kwezikhangiso.
Ngakho-ke umkhiqizo wakho ungabonakala kanjani ngomsindo? Njengoba i-AI ibhekise kwimpahla okuwukuphela kwendlela yokubamba ukunakwa ukuletha ubuciko obuhehayo.
Yize kunjalo abathengi bavame ukubona izikhangiso ezinikezwa ngumakhalekhukhwini njenganamuhla ziyacasula noma zingenele. Isifundo esifanayo seForrester sathola abathengi bebika lokho Amaphesenti angama-73 wezikhangiso ezihambayo kubonakala ngosuku olujwayelekile kwehluleka ukudala umuzwa omuhle womsebenzisi. Kubakhangisi, lokhu kusho ukuthi izikhangiso zabo zeselula zivame ukungenzi kahle. Ngokwesilinganiso, u- $ 0.55 wedola ngalinye elichithwe emikhankasweni yezikhangiso ezingamaselula alikhiqizi inani elibonakalayo lenhlangano.
Kungakho sithuthukile I-Creative Factory ™, i-studio yezikhangiso ezihudulayo neselula evumela ama-brand, ama-ejensi wokudala, abashicileli nezinkampani zobuchwepheshe bezikhangiso ngokufanayo ukudala izikhangiso ezihehayo zombili iselula nedeskithophu. Leplatifomu eyinkimbinkimbi yokuzisebenzisela ihlanganisa i-HTML5 ukuletha izikhangiso eziqhutshwa imiphumela ngokushesha nangempumelelo ngaphandle kolwazi lokufaka amakhodi oludingekayo nangentengo ebiza imali. Isikhangiso ngasinye sihlukile, sivumelana nalokho okusizungezile, futhi okubaluleke kakhulu, siyabamba futhi sixoxa izindaba.
Ukusetha okujulile kwezici zepulatifomu nezici ezingaphansi kuvumela zonke izikhangiso ukuthi zihluke futhi yonke imikhankaso igqame. Ipulatifomu isebenzisa amawijethi nezenzo ukufaka esikhundleni sokufaka amakhodi; Hudula bese ulahla, Ukubuka kuqala kudivayisi, ama-Templates, kanye nemodi ye-Open Canvas yizona zakhi zepulatifomu. Izici zifaka phakathi: I-Outstream Video, Dynamic Creatives, Indawo, Imidlalo ne-Logic, i-Responsive ne-Cross Screen, nokuningi.
ICreative Factory iyazisebenzela futhi kulula ukuyisebenzisa, ifaka izimiso ezintathu eziyinhloko:
Umsindo: susa isidingo sekhodi
Izihlungi: chaza lapho okuthile kwenzeka
Action: thola ukuthi yimuphi umsebenzi owenzekayo.
Ngokugubha lezi zikhulu ezintathu, noma yimuphi umklami angakha izikhangiso ze-HTML5 eziyinkimbinkimbi, eziphendulayo nezihehayo.
Sikholelwa ukuthi ukubeka izixazululo zokugunyaza ezingeni lobungcweti ezandleni zabo bonke abathengisi, abakhulu noma abancane, kuzovumela izikhangiso ukuthi zibambe iqhaza kakhulu futhi zisebenze kangcono, futhi lokhu kubaluleke ngendlela exakile esikhathini lapho ubumpumputhe besibhengezo kanye nezivimbeli zezikhangiso zikwenza kube nzima futhi kunzima ukufinyelela izethameli nhlobo.
Ukuvinjelwa kwezikhangiso kuyinselelo yangempela embonini. Umbiko we-BI Intelligence uthole ukuthi ithrafikhi yeselula ibona isikhangiso esiphindwe kathathu sivimba umhlaba jikelele kunedeskithophu. Lokhu kubeka usongo olukhulu ezinkampanini zemidiya zedijithali ezincike ekukhangiseni kwemali engenayo. Uma ukuvimba isikhangiso kumaselula kufinyelela kumazinga wedeskithophu, izinkampani zemidiya zedijithali zase-US zingalahlekelwa cishe ngama- $ 9.7 billion kuwo wonke amafomethi wesikhangiso sedijithali ngonyaka ozayo.
ICreative Factory, umkhiqizo wethu wesizukulwane sesibili, iklonyelisiwe ngeminyaka yokuphendula evela kumakhasimende ethu futhi yenzelwe ukuthi ikhululeke futhi yenze inqubo esebenza kangcono kakhulu yokwenza izikhangiso zemidiya ezinothile ngenkathi ihlinzeka ngesethi eyinkimbinkimbi yezici ukuvumela izinketho ezingapheli zokudala. Sikholelwa ukuthi umphumela wokuwina wemikhiqizo nabathengi ngokufanayo.
Tags: ifektri yokudalaIsikrini EsiphambanweniIzidalwa Ezinamandlaimidlaloindawologicisikhangiso seselulaisitudiyo sesikhangiso seselulaIvidiyo engaphandleisabele
U-Yariv Erel ungomunye wabasunguli kanye ne-CEO ye njeAd, inkampani yobuchwepheshe bokudala enikela ngesitaki esigcwele sokwakhiwa kwesikhangiso ukwenza izikhangiso zemidiya ezicebile eziqhutshwa yimiphumela. Imikhiqizo imosha imali futhi ifaka idumela kwizikhangiso zedijithali ezingasebenzi. Izikhangiso ze-JustAd ezibandakanyayo, ezingabizi kakhulu zakha okuhlangenwe nakho komsebenzisi okunenjongo.
IKaon AR: Ipulatifomu eyiqiniso ye-B2B
I-TeamKeeper: Isimanje Ukugcinwa Kwethalente nge-Management Analytics